अहंकार कसैले नगरे हुन्छ, हरेकका अहंकार टिकेको इतिहास छैन नेपालको, त्यसकारण अहिले धर्मनिरपेक्षता सहितको संघीय गणतन्त्रको जुन सवाल छ, त्यो यिनै राजनीतिक दलहरुका निष्ठाबिहीन चरित्रले सफाचट हुने दिन त्यति टाढा छैन ।
अहिले जे जस्ता परिदृश्यहरु देखिएका छन्, यो त काष्टिङमात्रै हो, गम्भीर प्रकृतिका विश्लेषकहरुको निष्कर्ष छ– देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या ? यसकारण पनि यो संविधान च्यातिन्छ, दुर्घटनामा पर्छ ।
मुख्य सवाल संविधानप्रतिको बफादारिता र इमानदारिताको हो, यो दुबै गुण हाम्रा वर्तमानका नेतागणमा पटक्कै देखिदैन । जब व्यक्तिस्वार्थका लम्पट नेताहरु शिखरमा हुन्छन्, त्यतिबेला जतिसुकै राम्रो संविधान, पद्धति भए पनि त्यसले माटो खान्छ ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि जे जस्ता शासन देखियो, त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, हाम्रा नेताहरु सुध्रनेखालका र देशको चिन्ता गर्ने प्रकारका नेता नै होइनन् । यिनको प्राथमिकता भनेको सत्ता स्वार्थ हो, सत्ता पाए राम राम, नत्र सडकगान यिनको चरित्र नै हो । यस्तो चरित्रले पनि संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ र ?
मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता संस्थागत हुने क्रममा छ । भोलि आउनेराष्ट्रिय संकटलाई एकथरिले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरेर यो शासन प्रणालीलाई सहर्ष स्वीकारेर बसेका छन् । हिजो राजतन्त्रलाई मास्नका लागिदिइएको आकर्षक नाराहरु मध्ये यिनै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नै प्रमुख नारा थिए । राजतन्त्रमा एकात्मक राज्य प्रणाली थियो, सामन्ती र शोषहरुको जगजगी थियो, हिन्दुधर्म राजधर्म भएकाले अरु धर्मलाई मौलाउन दिइएको थिएन र राजतन्त्र वास्तवमै खर्चिलो व्यवस्था थियो भन्दै जनता उचाल्दै आखिरकार ०६५ सालमा बलजफ्ती गणतन्त्रको घोषणा गरियो ।
अझ राजतन्त्रमा जनताको कनुै अधिकार भएन, राजतन्त्रले दमन मात्र गर्‍यो भन्ने आरोपले त केही नेपालीहरुलाई ठूलैकाम गर्‍यो । यी र यस्तै नाराहरुको पछि लागेर आयातित व्यवस्थाका लागि जनआन्दोलनमा गरिएको गुण्डागर्दी ती केही नेपालीहरु खुलेरै लागे र अन्तत: सफल पनि भए । तर आज...?
ती मध्ये अधिकांश पछुतो मानेर बसेका छन् । गणतन्त्र त छाडातन्त्र रहेछ, संघीयता भनेको देश टुक्य्राउने तन्त्र रहेछ अनि धर्मनिरपेक्षता भनेको कृश्चियनतन्त्त रहेछ भनेर बल्ल पुर्पुरोमा हात लगाएर बसेका छन् । अव पछुताएर के गर्ने ? धेरै नै अवेर भइसक्यो । नेपाललाई सिध्याउनका लगि भइरहेको कसरतको अन्तिम चरणमा पुगेको छ मुलुक ।
वर्तमान मुलुकमारा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ। यसै महिनाको २६ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएर गणतान्त्रिक संविधान संस्थागत हुनेछ । अव त्यसैका लागि सातवटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ती भए, सातवटै प्रदेशका अस्थायीराजधानी तोकिए, प्रदेश सभासदहरुले सपथ लिएर मुख्य मन्त्री नियुक्त हुने क्रम एकदम नजिएको छ । अव त्यसो त, प्रदेशका लागि नियुक्त सचिवहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा पुगेर जिम्मेवारी समेत सम्हालिसके...अर्थात मुलुक पुरै संघीय संरचनामा होमिइसक्यो, गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन भइनै सक्यो ।
अव धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्दा जनआन्दोलनको बलजफ्ती सफल भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कार्यान्वयन भएको हो । किसमस देखि लिएर इदसम्मका पर्वहरुमा राष्ट्रिय विदा दिएदेखि नै धर्मििनरपेक्षता कार्यान्वयनमा गयो भनेर एकथरिले भन्न थालिसकेका थिए ।
भन्नुको तात्पर्य परचक्रीहरुको इसारामा यहाँका अनुहार नेपाली तर मन विदेशी भएका नेताहरुले संविधानमा लेख्नुभन्दा अगावै राजालाई निलम्बनमा राखेर गणतन्त्र अनि धार्मिक स्वतन्त्रता दिएर धर्मनिरपेक्षतालाई कार्यान्वयनमा लगिसकेका थिए भने, संघीयता बल्ल कार्यान्वयनमा जाँदै छ । एकथरि खुबै खुशी छन् । देश जता गए पनि जावस् भन्नेहरु खुशै प्रशन्न देखिन्छन् । नेपाली नेपालीवीचमा सदभाव खल्बलिए पनि, हाम्रो आफ्नो मौलिक पहिचान हराए पनि, थपिएका कथित जन प्रतिनिधिहरुको भार बढेता पनि, एकथरि खुब खुशी छन् । प्रदेशको राजधानीका बारेमा विवाद भएर आन्दोलन ुहने तर मुलुककै सिमाना खुम्चिदा पनि, मिचिदा पनि केही नबोल्ने नेपाली जनतादेखिेर परचक्रीहरु पनिखुशी नै भएका छन् ।
तर बहुसंख्यक नेपालीहरु, जो हिजो लहैलहैमा लागेका थिए, जो परिवर्तन भएमा के के न हुनछ भन्ठानेका थिए, ती तन्द्रमा थिए र अहिले होसमा आएका छन् । तिनीहरु आज धारे हात लगाउँदै आफू र आफ्ना कथित गणतन्त्रवादी नेताहरुलाइृ सराप्दैछन् । हिजो शासन व्यवस्थाको कुरा थियो, आज परिवर्तनको नाममा मुुलुककै अस्तित्वको सवाल उठेको छ । नेपाल रहने कि नरहने ? त्यति दयनीय अवस्थमा छौं हामी ।
सुर्ता नमानौं, जतिसुकै कार्यान्वयन गरे पनि जतिसुकै संस्थागत गरे पनि अहिले देश जलाएर न्यानो अनुभव गर्नेहरुले ढुक्क नभए हुन्छ । ०१७ सालको संविधान पनि त्यस्तै गरेर ०४७ उत्कृष्ठ भनिएको संविधान पनि कार्यान्वयन भएकै थियो । जनता उठ्छ, यो मुलुकमा संविधान च्यात्छ, च्यात्छ । किनभने यो संविधान नेपालको अराजकता र अस्थिरताको जो कारक बनेको छ । नेताको नैतिकहीनताले आगेमा घ्यू थपेको छ ।